Breaking: उपत्यकाका तीन सिडिओको बैठकले गर्‍यो एस्तो निर्णय, ३ वटै जिल्लामा कडाइका साथ लागु गर्न निर्देशन !
९ भाद्र २०७७, मंगलवार १७:३६ प्रकाशित
काठमाडौ उपत्यकामा दिनहुँ कोरोना संक्रमितको संख्या थपिदै गएपछि जारी गरिएको निषेधाज्ञा फेरी बढाइने भएको छ । त्यसको तयारीका लागि उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु जनकराज दाहाल, हुमकला पाण्डे र नारायण प्रसाद भट्ट बैठकमा छन् । यस अघि लागू गरिउको निषेधाज्ञाको निर्णय बुधवार सकिदैछ ।तीनवटै जिल्लाका जिल्ला सुरक्षा समितीको निर्णयले भदौ ३ को मध्यरातदेखि ९ गते सम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो ।
निषेधाज्ञा पछि कोारेनाको कन्ट्याक ट्रेसिगमा रहेकाहरुको बारेमा पहिचान भएको र चेन ब्रके भएको निष्कर्ष तीन सिडिओले निकालेका छन् । तर पनि कोरानो निण्न्त्रणका लागि थप केही दिन निषेधाज्ञालाइ निरन्तरता दिने पक्षमा उनीहरु देखिएका छन् । आवागमन बन्द गरेपछि भीडभाड कम भएको र त्यसबाट उपत्यकामा कोरोनाको दर घटेको स्थानीय प्रशासनको निष्कर्ष छ । निषेधाज्ञाको मोडालिटी चेन्ज गर्ने कि यसअघि जारी आदेशलाई निरन्तरता दिने भन्नेबारे सिडिओ छलफलमा जुटेका हुन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी र उपत्यकाका तिनवटै जिल्लाका कोभिड–१९ जिल्ला क्राईसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (डिसीएमसी)को बैठकबाट निषेधाज्ञाको समयसीमा थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।सोमवार बसेको बैठकले पनि भदौ १५ गते सम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी राख्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । निषेधाज्ञाको मोडालिटी चेन्ज गर्ने कि यसअघि जारी आदेशलाई निरन्तरता दिने भन्नेबारे सिडिओ छलफलमा जुटेका हुन् । कोरानो निण्न्त्रणका लागि थप केही दिन निषेधाज्ञालाइ निरन्तरता दिने पक्षमा उनीहरु देखिएका छन् । सोमबार उपत्यकाका स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञाको प्रारम्भिक समीक्षा गरेका थिए ।
सो बैठकमा अहिलेकै निषेधाज्ञाको स्वरुपलाई निरन्तरता दिनुपर्ने कुरा उठेको थियो ।यो पनि: एक हप्तामा ३ हजार भन्दा बढीले घट्यो सुनको मूल्य ! कति पुग्यो ? [मूल्य सहित] बिगत देखि दिन देखि घटिरहेको सुनको मूल्य मंगलबार पनि घटेको छ। मंगलबार सुनको मूल्य प्रतितोला ७ सय रुपैंयाले घटेको हो।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९७ हजार २ सय तोकिएको छ । जबकी सोमबार सुनको मूल्य रु ९७ हजार ९ सय थियो। यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ९६ हजार ७ सय निर्धारण गरिएको छ ।
सुनको मूल्यले साउन महिनामा रेकर्ड बनाएको थियो। त्यस समयमा सुनको मूल्य लाख कटेर १ लाख ३ हजार ५ सय सम्म पुगेको थियो। त्यस यता सुनको मूल्य लगातार घटबढ हुँदै आएको छ। सुनको मूल्य गत हप्ताको मंगलबार १ लाख ४ सय पुगेको थियो भने एक दिन स्थिर रहेर घट्न शुरु भएको थियो। त्यसयता सुनको मूल्य ३ हजार २ सयले घटिसकेको छ। मंगलबारको मूल्य साउन १२ गते यताकै सस्तो पनि हो ।आज चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। आज चाँदी प्रतितोला एक हजार ३ सय २० मा कारोबार भैरहेको छ।